Muchuchusi ane mukurumbira muSouth Africa VaGerrie Nel vanoti vave kumiririra Gabriella Engel, musikana ane makore makumi maviri anonzi akarohwa naAmai Grace Mugabe kuSandton, Johannesburg mushure mekunge vamuona vaine vanakomana vavo muhotera kuSouth Africa.
Hurumende yeSouth Africa ichiri kuzeya chikumbiro chemuzinda weZimbabwe muSouth Africa chekuti Amai Grace Mugabe vobatwa semunyarikani here kana kuti diplomat kuti vasaendeswe kumatare nemhosva yavari kupomerwa iyi
Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vari kuSouth Africa kumusangano weSADC summit.
Gurukota rinoona nezvekushanyirwa kwenyika VaWalter Mzembi vokurudzira vatori venhau kuti vanyore nyaya dzakanaka nezveZimbabwe asi venhau ava vanovaudza kuti hurumende ndiyo inofanira kubvisa mitemo inodzikirira vatori venhau.
Vanhu vekuMasvingo vopesana panyaya yekuti Amai Shuvai Mahofa igamba renyika here kana kuti kwete.
Muchirongwa chedu cheLiveTalk-Women’s Round Table na8;00pm nhasi, tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa Amai Grace Mugabe yekurova mumwe musikana ane makore makumi maviri kuSouth Africa uyo ainge ari muhotera nevana vavo